बलिउडलाई ट,क्क,र दिँदै नेपाली ‘सेलिब्रेटी’ ! – " सुलभ खबर "
बलिउडलाई ट,क्क,र दिँदै नेपाली ‘सेलिब्रेटी’ !
कुन कुन कुरामा नेपाली ‘सेलिब्रेटी’ले विदेशी ‘सेलिब्रेटी’सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् यो भिन्न प्रश्न हो । तर, नेपाली सेलिब्रेटीहरु ‘शो अप’ गर्ने सवालमा भने नि:सन्देह विदेशी ‘सेलिब्रेटी’हरुलाई ट,क्क,र दिन सक्छन् । अझ नायकमा भन्दा पनि नायिकाहरुमा यस किसिमको प्रवृत्ति धेरै देख्न पाईन्छ । चाहे त्यो ‘बिकिनी’मा ‘एक्स्पोज’ हुने कुरा होस् वा विवाहलाई धुमधाम बनाउने प्रसंग नै किन नहोस् । पछिल्लो समय यस्ता विषयहरुमा ‘शो अप’ गर्न नेपाली नायिकाहरु बलिउड नायिकाकै हाराहारीमा देखिएका छन् ।
कुरा गरौँ अहिलेकी नम्बर वन नायिका प्रियंका कार्कीको । बलिउडलाई टक्कर भनौँ वा उनीहरुको नक्कल ? उनी प्राय बलिउडका नायिकाहरुको जस्तै पारा देखाउन खोज्छिन् । कान्स फिल्म फेस्टिबलमा भारतीय नायिका प्रियंका चोपडाको नक्कल गरेका कारण उनी ‘कन्ट्रोभर्सि’मा पनि परेकी थिइन् । झन् केही समय अघि सम्पन्न भएको उनको विवाहको ‘स्टाईल’ले त भारतका मै हुँ भन्ने ‘सेलिब्रेटी’ लाई पनि पछि पारेको थियो ।
मेहेन्दी होस् या संगीत हरेक कार्यक्रममा उनी फरक फरक अवतारमा देखिएकी थिईन । २–३ वटा कार्यक्रम एकै दिन राखिएको हुँदा उनको पहिरन मिनेट मिनेटमा ‘चेन्ज’ भएझैँ लाग्थ्यो । उनका लवाईदेखि विवाह स्थलको साजसज्जा हेर्दा साच्चैँ उनले भारतीय सेलिब्रेटीलाई नै टक्कर दिएझैँ लाग्थ्यो ।प्रियंकाको रमझम सकिन नपाउँदै अहिले फेरि अर्की नायिका आँचल शर्माको चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ । आफ्नो परिवार र आफन्तहरुबीच सामान्य तौर तरिकाबाट प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग टिकाटालो गरेकी उनले ‘रिसेप्शन पार्टी’ भने धुमधाम सँग नै गरिन् ।
प्रियंकाको विवाहसँगै जुधेकाले आँचलको ‘इन्गेजमेन्ट’र विवाह ओझेलमा परेको थियो । सर्वसाधारण र मिडियाले पनि उनको विवाहलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिएका थिएनन् । सायद त्यही कारणले हुनुपर्छ, सम्पूर्ण सेलिब्रेटी, मिडिया र सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गराउन उनले ‘रिसेप्शन’ पार्टीमा ‘धुम’ मच्चाइन् ।
आँचलले ‘रिसेप्सन्’मा हेलिकप्टर चार्टर गरिन् । अर्थात होटल हायातमा उनी हेलिकप्टरबाट झरिन् । त्यति मात्र होइन उनले चर्चित भारतीय फेसन डिजाईनर साब्यासाचीको डिजाईनमा बनेको पहिरन लगाईन् । जुन पहिरन १६ लाख रुपैँया बराबरको भन्ने हल्ला अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलेको छ ।
१६ लाखको पहिरनले उनको कुनकुन एंगलमा चर्चा भयो र हुनेछ, यो पनि भिन्न बिषय हो । तर, १६ लाखको पहिरन लगाउने पहिलो नेपाली नायिका चाहिँ आँचल भएकि छन् । हाँस्यास्पद कुरा चाहिँ के रह्यो भने उनी ‘रिसेप्सन पार्टी’मा ‘बडिबिल्डर’ ‘बडिगार्ड’का साथ प्रकट भइन् ।
कलाकारको निजि जीवनमा दखल अन्दाजी गर्ने हाम्रो कुनै हक छैन र दखलअन्दाजी गर्न चाहेको पनि होइन । तर समाजको ऐनाका रुपमा लिईने चलचित्रका पात्रहरुले चलचित्र र अभिनयमा ध्यान नदिई यस्ता बकम्फुसे २ दिने रमझममा देखासिकी गर्न थालेपछि समाजमा यसको संदेश कसरी प्रवाह होला ? यस सम्बन्धमा स्वयंम् कलाकारहरु नै जानकार हुन जरुरी छ ।